Trends na Contemporary Art: Kedu
Artist - Oleg Soloviev
Emere na 1998
Etu ịhọrọ eserese maka ime ụlọ
Ihe osise dị na ime nke ulo
ebe obibi » ozi » Trends na Contemporary Art
Trends na Contemporary Art
Contemporary art na art ahịa na-ịgbasa na onye ọ bụla na-agafe n'ụbọchị. N'ezie, technology nyere ọhụrụ kwalite izute ọhụrụ nka na ọnọdụ. Nke a adịchaghị ileta ngosi na ngosi ihe mgbe ochie, na-eso na ntọhapụ nke ndị ọhụrụ directory: naanị jikọọ na Internetntanetị - ụwa niile nka site na mgbe ochie ruo taa na-apụta n'ihu anyị. Ka anyị leba anya na usoro dị ugbu a na nka ọgbara ọhụrụ.
N’isiokwu a, anyị ga-atụle isi ihe dị n’ụwa nke eserese., arụmọrụ na nwụnye.
Imagedị ụdị ọmarịcha ụwa nke ụdị okike. Mbiara site na esemokwu mbibi, mmetụta a na-akpọ glitch, ọkachasị na ụwa dijitalụ - omume na-ewu ewu n'etiti ndị na-ese ihe. Na mbụ, ụdị curvatures dị otú ahụ, nrụrụala na-akpasu iwe. Agbanyeghị, nka ọgbara ọhụrụ agbagoro usoro ole na ole elu.: mgbe ahụ, ihe bụbu ọlụlụ, mepụta ugbua. 2018 afọ – oge n'ezie, mgbe eserese nke nwere ike ịmịpụta ụwa.
Ọzọ, anya ihe-ese ihe, nke ọtụtụ iri afọ gara aga, ọ gaghị ekwe omume iche. Na mmepe nke usoro elektrọnik, mpempe akwụkwọ, O di nwute, na-enwe ọ bụghị oge kachasị mma nke ịdị adị. Agbanyeghị, Ndị nka na-ahụ ụwa niile anya n'anya kpamkpam, na maka ndị ọzọ, ọ bụ naanị ihe, Maka ha, ọ bụ maka iji rụpụta ọrụ ebube. Ọ bụ ngwugwu akwụkwọ ndị ahụ ghọrọ ihe ndị ahụ, site na nke ọ mụrụ ịrịba ọgụgụ, Ọdịdị. The ụdị na ọdịnaya nwere zuo ezu onye ọ bụla ọzọ ma ọ bụ, ma ọ bụ na-emegide, amụba iche iche Jeremaya mere si na-ege ntị.
Ụfọdụ nka ahọrọ motifs nke ụmụ anụmanụ na osisi, Rachel e.g. Asha (Rachael Ashe), ọzọ, ka Anouk Kruitof (Anouk Kruithof) Ọ kere a ọkpụkpụ achọ ntisa mgbidi. N'ihi na ihe ndị mmadụ na-nnọọ ụdị akwụkwọ akwụkwọ, dictionary, memoirs ghọrọ a echiche. N'aka-ha, na-ege ntị ga-ahụ a akwụkwọ na a kpamkpam dị iche iche n'akuku, ma ọ na-erughị mara mma.
Ihe osise si n’aka ndị na-ewu ụlọ Lego
Nwere ike iche, na ndị okike nke ụdị eccentric mejupụtara nanị ma ha etobeghị na mkpụrụ obi, ma ọ bụ na ị gwabeghị nke ọma. Agbanyeghị, ndị na-ese ihe na-eme ọ bụghị naanị ihe osise na-enweghị nghọta, ụgbọ mmiri dị mfe ma ọ bụ nnukwu ụgbọ mmiri, na ịtụnanya n'ọkwa na udi, abughi ihe umuaka nke emebere nka.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara narị afọ gara aga, e mepụtara onye ọrụ ama ama a., ole na ole n’ime uwa nke ndi mmadu, onye na-achọghị iburu ihe ọ bụla site na nkọwa ahụ. Ma maka ndị na-ese ihe, ọbụna ihe ngosi dị otú ahụ na ngwa ihe nlere anya mbụ ghọrọ ebe nke ga - eduga na ụzọ ọhụụ na ụwa nka.. Otu n'ime ndị okike ama ama na abụpụta ụwa ndị dị ịtụnanya bụ American neo-sculptor onye America bụ Sa Sawaya.. Ndị a bụ ole na ole ọrụ ya.: mmeputakwa nke Edward Munch's Scream, nnomi nke Parthenon na, n'ikpeazụ, ọkpụkpụ dị okpukpu anọ nke tyrannosaurus.
Mbido eriri na eriri
Kedu ihe ha ji mee, ọ ga-adị ka, ordinarydọ nkịtị ma ọ bụ eriri? Ndị na - ese ihe si ihe ndị a maara nke ọma wee si n'ọnọdụ pụrụ iche pụta. Ha anaghị akwa ahụ ma ọ bụ ihe mkpuchi mkpuchi, na akwa.
Ka ihe atụ,, Japanese chiharu shiota braids gburugburu eri nke ime ụlọ ma ọ bụ ihe dị iche iche. Fọdụ ndị na-ekiri ọrụ ahụ masịrị ọrụ ahụ, ndị ọzọ na-ele ha anya dị ka iru uju na ihe na-emenye ụjọ. Agbanyeghị, adịghị anọgide na-enwe mmasị. Onye isi Mexico Dave mepụtara nrụnye dị ukwuu site na eriri eke na egwurugwu. Site na ọrụ ya, onye edemede na-anwa iche echiche banyere mkpa mmadụ maka nchebe na ndo. Scott Howe nke eri, ụdọ, ejima, ụdọ na-enye cobwebs. Ma lee Emil Lucas, na-eji ụdị ihe a na-adịghị ahụkebe, na-adọta eserese. Kama, kechie bọọdụ na-acha uhie uhie na osisi, na -eme ihe nkiri dị ịtụnanya.
Naanị ndị na - ese ihe ole na ole kwuru. E nwere ọtụtụ ndị edemede n’ụwa., nke mejuputara ihe ịtụnanya n’ime nrụnye ha, na-atụgharị uche n’isiokwu dị iche iche, onye na-emetụ ha aka.
Onye edemede edemede mbụ
Omume na-adọrọ mmasị, nke na-enye ohere izuta ihe okacha amara obughi site n’aka ndi nwere nde ego na ndi inara ihe. Oge ihe ndebe aka kwere ka ileputa ihe ngosi nka anya na otutu uzo na uzo ahia di di iche.
Kedu ihe anyị na-ekwu. Edere eserese a na nkenke mmachi ma obu na akwukwo, ọ bụla na kwaaji. N'okwu a, ibe ọ bụla bụ nke mbụ, nke asambodo na-egosi.
Ihe nka n'okporo uzo nka
Ihe nka uzo di iche iche di iche-iche: ndị ode akwụkwọ na-anwa ọ bụghị naanị igosipụta ọrụ ha n'ihu ọha, kama tinyekwara ndị na-ege ntị na egwuregwu gị. Gaghị atụ onye ọbụla nwere nka okporo ụzọ - ụfọdụ na-ahụ imebisị ihe na nke a, ebe ndị ọzọ na-enyocha ma na-atụle ọrụ ndị masịrị ha. Ọtụtụ ndị na - ese ihe a ma ama n'ụwa nka na - anwale onwe ha n'ụdị ụdị mbụ a, mana amaghi ama.
Isi ihe dị na foto ndị a bụ echiche., nke odee na-anwa ime ka ndi mmadu bia.
Zingwa dị ịtụnanya, na ndị omenkà kere, gbasara ezigbo ihe ma ọ bụ ihe dị ndụ, yana ike ụmụ nwoke pere mpe. Gburugburu ụwa dị iche iche: eziokwu yiri ya, nwata ma ọ bụ oge nkịtị na ndụ. Thumbnails -akpọ usoro ya. Karịsịa mgbe nna ukwu nwere echiche dị ịtụnanya na-ebufe ndụ dị adị na obere oghere.
Authorsfọdụ ndị na - ede akwụkwọ na - atụgharị pistachio nkịtị ka ọ bụrụ ahịhịa Martian, ndị ọzọ jupụta ahịhịa, ájá na ndi mmadu, Maka ndi ozo, otu kalama eji amata ihe maka umu nwoke bu nkpuru zuru oke maka igba nkpuru.
Nkà nka nke oge a kariri ogige nka na ulo akwukwo, ọ bụ kpam kpam n'adịghị ka, na kpebiri igosi na ngosi ihe mgbe ochie. Na ihe a niile bụ oké, n'ihi na ọ dịghị mkpa ka ike ókè, na pụrụ ichetụ n'echiche enweghị nsọtụ. Ya mere, na-eme n'ọdịnihu na anyị ga-atụ anya ịhụ ọbụna ihe pụrụ iche na ọnọdụ, n'ihi nke ndị dere mbụ ọrụ ga-obi ụtọ na-ege ntị.
Sale nke osise na St. Petersburg, foto ịtụ, sere n'ime ime.
Ahịa mmanụ sere na kwaaji. The price maka ịbịaru, ndịna, ink, gouache, akwụkwọ, Pop art, avant-garde, dịkọrọ ndụ art, na-ese.
price: si 15 000p. oge: si 2 ụbọchị
Ihe Nlereanya nke ọrụ m: sere | picture | Pọtụfoliyo